Somaliland oo noqotay Xuddunta ka Ganacsiga Sharci-darrada ah ee Harimcadka ee Bariga Afrika! | Aftahan News
Somaliland oo noqotay Xuddunta ka Ganacsiga Sharci-darrada ah ee Harimcadka ee Bariga Afrika!
Hargeysa(aftahannews):- Bishii hore ee July, laba Harimad ayaa khatar galay, ka dib markii ay 25 Maalmood ay Gacmahooda ku jireen Dad ka shaqaysta Dhoofinta Sharci-darrada ah ee Duur-joogta, falkaasina wuxuu ka dhacay Magaalada Boorama ee Xarunta Gobolka Awdal ee Somaliland, taasi oo aan ka fogayn xuduudka Itoobiya.
Harimcad-ka Dhasha ah ee lagu qabtay magaalada Boorama 24 July 2020 (Photo by CCF)
Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Global initiative oo ka shaqaysa dambiyada ka dhanka ah ugaadhsiga Duur-joogta Adduunka, Somaliland ayaa ka mid noqotay waddamo marin u noqday tahriibinta Haramcadka yar-yar oo loo dhoofiyo dalkalka Carabta.
Dhowaan ayay ahayd markii Shacabka ku dhaqan Magaalada Boorama ay gacan ka geysteen in la helo Harimo-cadyadaasi iyagoo khatar ku jira oo Awood-darreeyay, waxaana markaa ka dib soo gaadhay halkaasi hawl-wadeeno ka socday Sanduuqa daryeelka Harimo-cadka ee Magaciisa loo soo gaabiyo (CCF) oo wada-shaqayn la leh Wasaaradda Deegaanka Somaliland.
Arrintan ayaa qayb ka ah ugaadhsi joogto ah oo lagu hayo Harimo-cadka ku nool Somaliland, waxaana July illaa August, 2020 sidaasi oo kale khatar u galay 20 Harimo-cad, laakiin waxa lagu bedbaadiyey Hawl-gallo ay wada-jir u sameeyeen Wasaaradda Horumarinta reer Miyiga iyo Booliska oo ay taageerayaan Ururka CCF.
Sida lagu sheegay warbixinta, 14-kii Septemnber, laba Harimo-cad ayaa laga qabtay gobolka Sool, kan ugu yar wuxuu jiray laba toddobaad oo keliya. Guud ahaan, 25 Harimo-cad oo yaryar ayaa sannadkan gudihiisa lagu qabtay ama lagu badbaadiyey gudaha Somaliland
Waxa warbixinta lagu xusay in boqolkiiba 25 ka mid ah Harimo-cadka laga dhoofiyo Somaliland laga keeno dhinaca dalka Ethiopia.
Sida Warbixinta lagu sheegay Harimo-cadka dhasha ah ayaa gudaha Somaliland lagu kala iibsadaa 200 illaa 300 Dollar halka Harimo-cadka waawey qiimahiisu marayo ilaa 1,000 Dollar, laakiin Dalalka Khaliijka Carabta waxa laga siistaa qiimo gaadhaya $15,000, taasoo Somaliland ka dhigtay Dalka Bariga Afrika ugu badan ee laga ugaadhsado Harimo-cadka.
Maaha markii u horeysay ee warbixinno caalami ah lagu xuso in Somaliland marin u noqotay dhoofinta ugaadhsiga sharci-darrada ah ee Harimcad-cadka. Bishii July ee Sannadkii 2019-kii ayaa wabixin ay soo saareen hay’addo ka shaqeeyo ilaalinta Duurjoogta uu Harimcad-ku u horreeyo, ayaa lagu sheegay in Somaliland marin u noqotay ka-ganacsiga Sharci-darrada ah ee xayawaannada Dugaagga iyo Duurjoogta laga tahriibiyo Dalalka Bariga Afrika.
Bishii July sannadkii 2014-kii, ayaa warbixin uu soo saaray Urur lagu magacaabo CITES oo ka shaqeeya Ilaalinta duur-joogta,ayaa lagaga dayriyey xaaladda ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah Duur-joogta ka sii dabar-go’aysa dunida oo Harim-cadku ka mid yahay, iyadoo lagu xusay in Somaliland ka mid noqotay marinka ugu weyn Bariga Afrika ee laga dhoofiyo xayawaankan.